Tsy mbola vita ny lazon’ ady | NewsMada
Tsy mbola vita ny lazon’ ady
Efa mandeha ny asa fampandrosoana amin’izao? Miatrika ny fiainany andavanandro ny vahoaka, misokatra miandalana ny seha-pitaterana, efa mivoha ny fiangonana, mandeha ny fanomanana ny fidiran’ny mpianatra… Amin’izany, mitohy ny raharaham-pirenena toy ny fanomanana ny fifidianana loholona, amin’ny 11 desambra, ohatra.
Na izany aza, mbola tsy vita na mifarana tanteraka akory ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19. Any ho any ihany ny tsimokaretina coronavirus? Mbola misy, ohatra, ny tranga vaovao amin’ny fitondrana izany, misy koa ny mamoy ny ainy… Mandra-pahoviana? Miankina amin’ny fiaretana sy faharetan’ny tsirairay izay.
Tsy izay ve no nahatongavana amin’izao dingana fa­ma­ranana ny ady izao? Fiarovan-tena hiarovana ny hafa amin’ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana, fifam­pi­tsinjovana ao anatin’ny fotoan-tsarotra sy mafy… Avela ho azy amin’izao? Noho izany, mila tozoina hatrany ny ady natomboka… mba ho amin’ny tena fandresena farany.
Tsy fantatra izay mety ho fisehoan’aretina amin’ny fotoam-pahavaratra, raha ny ahiahin’ny sasany. Aretina vaovao io, saro-binanina be ihany? Eny, na miharihary sy azo antoka aza, ohatra, fa tsy matanjaka firy izany amin’izao maintany izao. Aleo àry mitandrina ihany. Heverina ho eny ho eny hatrany aloha ny fahavalo… tsy hita maso.
Ho toy ny valanaretina manana ny fotoany fa tsy mbola resy na foana tanteraka izany, raha ny tombantomban’ny hafa. Toy ny tazo, ny pesta, ny kitrotro… Tsy famen­dro­fen­droana, sanatria, na fatra-piahiahy… mamosavy ny eritreritry ny hafa amin’izay ho avy, fa mba hitandremana hatramin’ny farany. Tsy mbola vita na mifarana eo ny lazon’ady.
Tsy vitan’izay, mbola miovaova be ihany ny tarehimarika amin’ireo tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsi­mo­ka­retina; eny, na tsy mitsaha-mihena aza izany amin’ny an­ka­po­beny. Ady mitohy amin’ny fiainana andavanandro ho fomba fiaina ny fitandreman-tena, ny fitandroana fahadiovana, ny fifampitsinjovana… ? Tsy mbola vita ny ady.